Vee24: Rarama Vhidhiyo Engagement Inowedzera Kutendeuka ne38% | Martech Zone
Vee24: Rarama Vhidhiyo Engagement Inowedzera Kutendeuka ne38%
Mugovera, June 18, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhiki rino, ndakave neruzivo rwekushamisa Vee24's online vhidhiyo mhinduro yewebhu. Iyo kambani yanga iriko kutenderera makore mashoma ichigadzirisa musanganiswa Hardware uye software senge sevhisi mhinduro iyo inoshamisa isingadhuri.
chii Vee24 apedza hapana chinoshamisira kushamisa. Mutengi paanokusainira, vanotanga vatenga iyo Hardware, iyo inosanganisira shongwe ine vhidhiyo kamera, kumberi mwenje, nhepfenyuro yekutarisisa uye kunyange nepamhepo mwenje. Iyo komputa ndeye 24-inobata skrini yekutarisa inomhanya Windows 7 uye iyo Vee24 application.
Iyo software haina kungovhura yakavhura uye kutanga vhidhiyo. Iyo inobuda yakanaka Nice div inokupa iwe kuti utaure nemunhu iye kune rimwe divi. Iyo popup inogona kutangwa nemumiriri, inotangwa otomatiki, kana mushandisi anogona kudzvanya yakanaka tabu padivi rekona kuti itange iyo.
Kana mushandisi akagamuchira kukokwa, software yacho inokubatanidza nemumiriri. Kufanana nekuvhurwa kwevhidhiyo kuvhura (iwe unogona kuvhura kamera yako futi, mumiriri anogona kuona zvese zvese zvebrowser yako (Inoshanda Sisitimu, Bhurawuza, nezvimwewo) uye kunyangwe iro peji riine zviyero zvakafanana. Vanogona zvakare kufambisa hwindo ravo kunze yenzira yekukupa yakanyanya real estate.
Zvichida chinonyanya kushamisa ndechekuti Vee24 zvakare ine chikamu chekugovana - ichibvumidza magwaro, mapowerpoints kana chero imwe faira kuvhurwa nekugovaniswa. Kwete chete iwe unogona kuigovana… unogona kunyatso kudyidzana pamwe nemumiriri. CEO Andy Henshaw akandifambisa kuburikidza nekuraira zororo pane imwe saiti ... chiitiko ichi chaishamisa, zvaigona kunge zvisina kuve nyore. Isu tiri vaviri takakwanisa kuita shanduko kune fomu riri papeji rimwe chete, panguva imwechete uye ndokutumira!
Mhedzisiro yevatengi veVee24 yatove inoshamisa… makambani akaita saFord, Lexus, Lands 'End, Mini Couper, Heels.com uye mazana emamwe makambani ari kuona 38% simudza mukutendeuka kwemitengo. Mhinduro yevatengi yehurongwa hwave huri kunze kwemachati zvakare.
Heano chiratidzo chevhidhiyo cheVee24 paInternet World
Nepo yakawanda yemhedzisiro mhedzisiro ichionekwa nekutengesa, ini handigone kufungidzira kuti chii kudyara musoftware seichi kunogona kuitisa kuchengetedzwa kwevatengi paSoftware semakambani eSevhisi. Iko kugona kunyatso kuonana uye kugovana skrini kunozoita kuti vatengi vasave nyore panzvimbo pezvino zvirikuitika zvino! Zvinotaridza kuti Vee24 haisi iye chete mutungamiri mune ino indasitiri, ndiyo yega kambani irikupa iri sevhisi. Pasina mubvunzo ivo vanozove vanobudirira zvakanyanya! Tiri kutovarova kuitira kuti vatumire kubatanidzwa.
Saka usakanganwa kuvaudza kuti iwe wakaziva nezve sevhisi kuburikidza Martech Zone!
Zvemagariro Midhi Nguva
Pa vee24: Haugone kubvuma zvimwe. Tiri kushandisa vee24 suite kune vashoma vevatengi mumusika wechiGerman uye zvinotyisa. Asi izvo zvakakosha sekugadzirwa kwetekinoroji: zvinobatsira vatengi vedu kutyaira bhizinesi. Mumaonero angu iyi ndeimwe yenzira dzinoshanda kwazvo dzekugadzira zvinotungamira uye zvekuwedzera kutengesa pamusoro pe internet!